ISundowns iqale umkhankaso wamaqoqo ngokunqoba | Scrolla Izindaba
ISundowns iqale umkhankaso wamaqoqo ngokunqoba
IMamelodi Sundowns iwuqale kahle umkhankaso wayo wamaqoqo we-Total CAF Champions League, ngokunqoba ekhaya ngamabili eqandeni ngesikhathi ibhekene ne-Al Hilal e-Loftus Versfeld Stadium e-Pitoli ngoMgqibelo.
Amagoli angene esiwombeni ngasinye eshaywa umdlali wasemuva uMosa Lebusa kanye nomgadli uKermit Erusmas, abenele ukunikeza aMasandawana isikhuni samagoli amabili nendawo phezulu eqenjini kulandela ukubambana okushaqisayo phakathi kweTP Mazembe (yase-Zambia) neCR Belouizdad (yase-Algeria) komunye umdlalo.
UMose Lebusa ubhale kuTwitter ukuthi: “Sihlaziye amakhona abo futhi sasebenzisa lokho, ikakhulukazi nendlela abadlala ngayo ibhola eduze kwepali okuyilapho engishaye khona igoli.”
“Ngangazi ukuthi uma ngathola ibhola ngalithinta, liya phakathi epalini. Besilokhu sisebenza ngakho futhi ngiyajabula ukuthi kuphumelele.”
Ompetha be-CAF 2016 badlale neqembu lase-Sudan i-Al Hilal amahlandla amathathu kulo mqhudelwano, benqoba kabili kwathi ngowe-2008 bahlulwa ngamane kwamabili.
Ukungqubuzana kubone umdlali wasemuva osanda kusayiniswa uRushine De Reuck ehleli ebhentshini okokuqala selokhu ejoyine ama-Brazilians esuka kuMaritzburg United.
UMthobi Mvala, uKermit Erusmas kanye noPeter Shalulile baqale okokuqala bemele aBafana Ba Style emkhankasweni wamaqoqo.
Khonamanjalo, emdlalweni we-CAF Confederation Cup iOrlando Pirates inqobe ngamathathu eqandeni ekuhambeni ngesikhathi ibhekene nompetha be-Botswana iJwaneng Galaxy ukuze isondele emdlalweni wokuhlungela ukungena esigabeni samaqoqo ngeSonto ntambama e-Gaborone National Stadium e-Botswana.
Amagoli kaThulani Hlatshwayo, uLinda Mtambo kanye nozobamba isiwombe sesibili uJean-Marc Mundele anikeze amaBhakabhaka isibalo samagoli amathathu.
Umlenze wokubuya uzodlalelwa eGoli ngeSonto elizayo kanti iPirates inonyawo olulodwa esigabeni samaqoqo njengoba igcine ukudlala kowamaqoqo e-CAF Confederation Cup emuva ngowe-2015.
Umthombo wesithombe: @Masandawana